यस्तो बेश्यालय जहाँ सित्तैमा शारिरीक भोक मेटाउन पाईन्छ तर राखिन्छ अचम्मको यस्तो शर्त ! – RealPati.com
वेश्यालय भन्नाले मानिसहरुले पैसा तिरेर शारिरीक भोक मेटाउन पाउने अखडा सम्झनु पर्दछ । तर विश्वमा यस्तोपनि वेश्यालय छ जहाँ यौन क्रिडाको पैसा तिर्नु पर्दैन । धेरै जसो मुलुकमा वेश्यालयहरुमा महिला राखिन्छ र पुरुषहरु पैसा तिरेर शारिरीक भोक मेटाउँछन् । तर दुनियामा यस्तो वेश्यालय छन् जहाँ पुरुषहरुलाई बिना पैसा नै यौन प्यास मेटाउन दिइन्छ ।
कुरा हो स्लोभाकियाको जहाँ यस्ता बेश्यालय छन् । जहाँ सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईन्छ । सुन्दै अच्च्मै लाग्दो हेन ? सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईने रे । त्याँहा यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । त्यसैले पनि सहवास गर्नका लागी मानिसहरुको लाइन नै लाग्ने गरेका छन् । तर सहवास गरिरहँदा भिडियो खिच्न मान्नुपर्छ । यो शर्त भने ति ग्राहकले मान्नु पर्ने हुन्छ ।
ति यौन कर्मी महिलासंग शारिरीक भोक मेटाइरहेको समयमा पोर्न फिल्ममा जसरी उनीहरुको यौनक्रिडालाई छायांकन गरिन्छ । जुन भिडियोलाई उनिहरुले ब्यबसायिक रुपमा बेचेर राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् । यही भिडियोबाट आम्दानी हुने भएकाले पुरुषहरुले निशुल्क यौन स्वाद चाख्ने अवशर दिइन्छ ।
अरे हिटलर पनि प्रेम गर्थ्यो कसैलाई………………
डा.गोविन्द केसीले तोडे १६ औं अनसन
कांग्रेस बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रजातान्त्रिक महासंघको जोड 129 views
बिश्व महामारीको इतिहास : स्पेनिस फ्लूले लिएको थियो पाँच करोडको ज्यान 69 views